China Agriculture Rotary Tillers ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Abalimi be-Rotary Tillers
I-rotler tiller enamazinyo wokusika ajikelezayo njengezingxenye zokusebenza ibizwa nangokuthi umlimi ojikelezayo. Ngokuya kokucushwa kwe-rotary blade axis, ingahlukaniswa ngohlobo lwe-eksisi evundlile nohlobo lwe-eksisi eqondile. I-tiller evundlile ye-rotary tiller enezingqimba zensimbi evundlile isetshenziswa kabanzi. Ukwahlukaniswa kunamandla aqinile okuchoboza inhlabathi. Umsebenzi owodwa ungenza inhlabathi iphuke kahle, inhlabathi nomanyolo kuhlanganiswe ngokulinganayo, nezinga lomhlabathi, elingahlangabezana nezidingo zokuhlwanyelwa komhlaba owomile noma ukutshalwa kwensimu ye-paddy. Kuhle ukulwela amahora ezolimo, ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, nokuwasebenzisa ngokugcwele amandla kagandaganda. Isetshenziswa kakhulu ensimini yelayisi nasensimini yemifino, futhi ibuye isetshenziswe ekutshaleni ingadi yezithelo. Ukujula kokulima kwe-tiller rotary esindayo esindayo esindayo kungafinyelela kuma-20-25 cm, okusetshenziselwa kakhulu ukubuyisa umhlaba wesihlahla, umhlaba wexhaphozi notshani ·
850 * 850 * 950mm
850 * 1050 * 950mm
900 * 1350 * 1000mm
900 * 1450 * 1000mm
900 * 1600 * 1000mm
900 * 1740 * 1000mm
900 * 1880 * 1000mm
1020 * 2056 * 1152mm
1020 * 2396 * 1152mm
1020 * 2636 * 1152mm
1020 * 2816 * 1152mm
1020 * 3256 * 1152mm
Ukusetshenziswa Kwe-Rotary Tiller
1. Ekuqaleni komsebenzi, i-tiller rotary kufanele ibe sesimweni sokuphakamisa. Okokuqala, hlanganisa ne-shaft yokususa amandla ukukhuphula isivinini se-blade shaft esilinganisweni esilinganisiwe, bese wehlisa i-rotler tiller ukwenza i-blade ingene kancane kancane enhlabathini ekujuleni okudingekayo. Akuvunyelwe neze ukuhlanganisa i-blade namandla okususa shaft noma ukulahla i-rotary tiller ngokucijile ngemuva kokungcwatshwa kwensimbi enhlabathini, ukuze ugweme ukugoba noma ukuphula i-blade nokwandisa umthwalo kagandaganda.
2. Ekusebenzeni, kuyadingeka ukugijima ngejubane eliphansi ngangokunokwenzeka, okungeke kuqinisekise kuphela ikhwalithi yokusebenza, kwenze izingcezu zenhlabathi zibe zinhle, kepha futhi kunciphise nokugqokwa kwezingxenye zomshini. Naka ukulalela umsindo noma umsindo wensimbi ongqongqozayo we-tiller ojikelezayo, futhi ubheke ukujula kwenhlabathi nokulima. Uma kukhona okungahambi kahle, misa umshini ngokushesha ukuze uhlolwe, bese uqhubeka nokusebenza ngemuva kokukuqeda.
3. Lapho uvula umhlaba, akuvunyelwe ukusebenza. I-rotler tiller kufanele iphakanyiswe ukugcina i-blade ingekho emhlabathini, futhi i-trekta mpintsha kufanele yehliswe ukugwema ukulimaza inkemba. Lapho uphakamisa i-tiller rotary, i-angle yokuthambekela kwe-universal joint kufanele ibe ngaphansi kwama-degree angama-30. Uma inkulu kakhulu, izokhipha umsindo onomthelela futhi ibangele ukugqokwa noma ukulimala ngaphambi kwesikhathi.
4. Lapho uhlehla, uwela igebe futhi udlulisa isakhiwo, i-rotler tiller kufanele iphakanyiselwe endaweni ephakeme kakhulu, futhi kufanele kunqanyulwe amandla ukugwema ukulimaza izingxenye. Uma uthuthela ebangeni, lungisa i-rotler ngedivayisi yokukhiya.
5. Ngemuva kokusebenza, i-rotler tiller kufanele inakekelwe. Susa inhlabathi kanye nokhula endlebeni, hlola ukuqina kocezu ngalunye lokuxhuma, engeza uwoyela wokuthambisa endaweni ngayinye yokugcoba uwoyela, bese ufaka igrisi kujoyinti lendawo yonke ukuvimbela ukuwohloka kokugqoka.
Langaphambilini Umshini Wokukhulula Umhlabathi Wezolimo
Olandelayo: Umtshali Wommbila
Ukulima kokusebenzisa-ipulazi trailer